The Ab Presents Nepal » खुसीको खबर‘कबड्डी ३’द्वारा विदेशी सिनेमा विस्तापित, व्यापारमा एकरुपता कायमै !
खुसीको खबर‘कबड्डी ३’द्वारा विदेशी सिनेमा विस्तापित, व्यापारमा एकरुपता कायमै !
काठमाडौँ – विदेशी सिनेमासँगै रिलिज हुँदा नेपाली सिनेमालाई एक किसिमको डर पैदा हुन्छ । अझ ठुला व्यानरका सिनेमाले नेपाली बक्सअफिसमा हलचल नै ल्याइदिञ्छन ।यस्तोमा विदेशी सिनेमासँग नेपाली डराउनु सामान्य जस्तै भैसकेको छ । तर, समय जहिले एक तर्फी हुँदैन । नेपाली सिनेमाले विदेशीलाई पाखा लगाएका केहि उदाहरण छन् ।
असोज ३ गते रिलिज भएको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले पनि विदेशी सिनेमालाई नराम्रोसँग पाखा लगाईदियो । रामबाबु गुरुङ निर्देशित सिनेमासँग हलिउडको ‘र्याम्बो: लास्ट ब्लड’ र बलिउडको ‘द जोया फ्याक्टर’ रिलिज भएका थिए ।कबड्डी ३’ दुई करोड नेपाली बजेटमा निर्माण भएको थियो । ‘द जोया फ्याक्टर’को बजेट ‘कबड्डी ३’को भन्दा २४ गुणा बढी थियो । भने, ‘र्याम्बो’ ५ अर्व ६७ करोड नेपाली बजेटमा निर्माण भएको थियो ।
नेपाली बक्सअफिसमासँगै रिलिज हुँदा ‘र्याम्बो’ले ‘कबड्डी ३’लाई असर गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । किनकी, हलिउडको सफल सिरिजको यो पाँचौ भाग थियो । यस्तै क्रिकेटको विषयमा बनेको ‘द जोया फ्याक्टर’ले नेपाली क्रिकेटका पारखीलाई हलसम्म तान्ने अनुमान थियो ।सुरुवाती शोजमा ‘कबड्डी ३’ले बाजी मारे पनि यी दुई विदेशी सिनेमासँग ‘कबड्डी’लाई जित्न सक्ने ठाउँ मिलेको थियो । तर, पहिलो दिनदेखि नै ‘कबड्डी ३’को दवदवा सुरु भयो । विकेन्डसम्म देशभरका अधिकाँस स्टेशनबाट विदेशी सिनेमा उतारिएको थियो ।
बुधबारसम्मको व्यापारमा नेपाली दर्शकको पहिलो रोजाइमा ‘कबड्डी ३’ नै परिरहेको छ । र, दोस्रो सातामा पनि सिनेमाले राम्रो प्रदर्शन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ ।‘कबड्डी ३’ले चौथों दिनसम्म नेपाली बक्सअफिसबाट ५.२० करोडको व्यापार गरिसकेको छ । पहिलो साता ७ करोड माथि कमाउने अनुमान गरिएको छ । बुधबारको ६०-८० अकुपेन्सीले सिनेमालाई सजिलै ७ करोड क्लबको बाटो देखाइदिएको छ ।
दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, रिश्मा गुरुङ, कर्मा शाक्य, विल्सन विक्रम राई, विजय बराल अभिनित ‘कबड्डी ३’ले विदेशी सिनेमालाई पाखा लगाउँदा नेपाली मेकरलाई एक किसिमको खुसि मिलेको छ ।